Manamboatra ny birao amin'ny ordinateran'ny solosaina
Mila fitaovana fanamboarana ny fiaranao ianao raha te-hiasa amin'izany!
Raha nanao izany lavitra ianao, dia mety ho tianao ny hiasa amin'ny fiaranao. Mety efa nanomboka nanangona ny fanangonana fitaovana mihitsy aza ianao . Tsy maintsy miaiky aho, mbola mahafinaritra hatrany ny mahita tranga misy fitaovana vaovao. Saingy matetika, ny mpahay simia DIY dia manadino iray amin'ireo fitaovana manan-danja indrindra amin'ny rehetra - fiara manamboatra fiara amin'ny fiara!
Matetika aho no mifampiresaka amin'ny roa amin'ireo manao azy io sy ny mekanika matihanina momba ny hoe na mila olona mila manamboatra fiara amin'ny fiara dia mila boky fandrakofam-pako amin'ny sekoly fanabeazana taloha.
Boky ara-batana, vita amin'ny taratasy? Izany dia sekoly tranainy loatra ho an'ny olona marobe mba handrakotra ny lohany manodidina ireo andro ireo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga rehetra, dia mpanohana goavana ny mandeha ny lalana nomerika aho. Raha ny zava-misy, amin'ny alàlan'ny fanontana printy amin'ny format digital ianao, afaka miditra amin'izy ireo na aiza na aiza, mamonjy sary, ary mampiasa ny fikarohana fikarohana tena ilaina rehefa miezaka ny manery ny safidinao hanamboatra ianao na mitady soritr'aretina manokana. Izany no antony lehibe rehetra hizarana dizitaly amin'ny fanamboarana fiara, saingy tsy ampy izany! Manoro soso-kevitra foana aho ny olona mandidy boky efa tranainy iray ampiasaina rehefa manamboatra na manamboatra fiara eo amin'ny fiarany. Ireto ny antony ilainao mila manamboatra boky amin'ny fitaovana arsenal anao:
Tsy afaka mamotika boky torolalana amin'ny famoretana, mamotika, manaparitaka, manakorontana, na ny hafainganam-pivarotana hafa.
Ny rantsan-tànana marevaka dia tsy miombon-kevitra amin'ny klaventy na ny fikitihana ny efijery.
Ny batterie dia tsy ho faty na oviana na oviana ao amin'ny boky fanolorana boky, na dia hafiriana ianao no mamela izany.
Tsy misy olona mikarakara ny fotoana handraisanao ny boky fanarenana, na inona na inona faniriany hijerena mailaka, milalao lalao, mijery resipe na bingo amin'ny horonan-tsarin'i Youtube.
Ny boky tena ilaina amin'ny fanamboarana dia nosoratan'ny teknisiana efa za-draharaha izay ahazoan-dalana amin'ny fampahalalana ara-teknika. Ity lehilahy ity izay manoratra ao amin'ny forum Honda dia mety ho kely kokoa, na ratsy kokoa.
Tsy vitan'ny hoe ny boky manontolo momba ny fomba-ny lahatsoratra, dia feno fanazavana ara-teknika manan-danja izay hanampy anao hanamboatra ny fiaranao araka ny tokony ho izy sy amin'ny fomba mahomby. Rehefa miasa ao anaty fiaranao ianao, dia ho gaga amin'ny fomba firesakao momba ny boky manamboatra anao. Indraindray dia mandeha mankany amin'ny pejy ianao, ohatra, torque torque , mba hahalalanao fa azo antoka fa tena misy voany na baolina ilaina. Raha tsy manana ny boky ianao, dia mety ho hitanao ny fanindroany ny angadinadin'ny torque sy ny hanomezana azy ny "fahamendrehanao tsara indrindra." Natao avokoa izany rehetra izany, fa mitsambikina mankany amin'ilay pejy izay milaza aminareo fa ny fihoaran'ny voanjo misy anao dia midika fa ianao no hanao ny fanamboarana azy. Ny fananana azy rehetra amin'ny toerana iray dia tena mahasoa. Matetika aho mampiasa ireto tsanganana kely misy bokotra kely ireto mba hanamarihana ny fizarana ao amin'ny boky izay heveriko fa mila miara-miverina. Manapaka izany amin'ny famoahana pejy ary hanampy anao tsy hanadino izany fikarohana malalanao izany izay mbola eritreretinao foana.
Ambany ambany: Raha tsy manana boky fanovana ianao dia tokony hividy iray androany. Raha manapa-kevitra ny handeha amin'ny làlan'ny fikarakarana ny serivisy ianao dia azo antoka fa mampiasa loharano azo antoka ianao. Feno olona avy amin'ny olona miteny (na karazana) miaraka amin'ny manampahefana nefa tsy fantany ny zavatra lazainy.
Mahafinaritra ny mihira toy ny manam-pahaizana an-tserasera raha tsy misy olona manohintohina anao. Indrisy fa mety ho hitanao fa ny torohevitra narahanao avy amin'ny seha-pifanakalozan-dresaka anaty aterineto dia mitondra anao any amin'ny fanamboarana ratra na ny vola mandany, na ny roa.
Ahoana no anaovana ny rafitra Mercedes-Benz BLUETEC
Inona ny toeram-pivarotan'ny Radiator Coolant na Antifreeze?
Nahoana ary ahoana ny fiovan'ny hafanana
Vahaolana ve ny Mampidi-doza?
Inona ny famadibadihana?
Chrysler: Marika Luxury sa tsia?
Ny fampiasana ny 'Despues' amin'ny teny Espaniôla
Tendrombohitra Fuji: Tendrombohitra malaza indrindra any Japana
Arabia Saodita | Facts and History
Hot-Button Issues sy Bodisma
Zava-bita amin'ny lokan'ny mpanoratra nahazo alalana Cynthia Rylant
Teny ampiasaina rehefa misotro
Astronomie 101: Fandalinana ny masoandro
Fiarahabana sy fifankatiavana
Predicciens temporada huracanes 2017 en USA, Caribe y Golfo de México
Top Genres Songs of the '80s
Ny fifandraisana amin'ny arkanjely Michael sy Saint Joan of Arc
Mamonjy pejy amin'ny Internet toy ny HTML na MHT mampiasa Delphi
6 Torohevitra momba ny fomba hivavahana
Mijanona ny sarin'ny Kôlera
Molecular Geometry Definition - Chemistry Glossary
KUHN - Faminaniana sy Tantaram-pianakaviana
Anarana iombonana amin'ny teny sinoa mandarina
Free Classroom Computer Online
Grika renim-pianakaviana ambony
7 porofo momba ny fitsanganana amin'ny maty
Fahatsiarovana mafana indrindra maneho ny heviny amin'ny mailaka Hillary
Top 12 English Dubs amin'ny Anime
Top 10 Ireo toetra mampiavaka ny Sekoly Kalitao
Daty nahafaty sy fanadihadiana an-tserasera